IStudio FAMU Isebenzisa Isixazululo se-Quantum sokufinyelela okukude nokulondolozwa kokuqukethwe | I-NAB Khombisa Izindaba | I-2020 NAB Show Media Partner kanye noMkhiqizi weNAB Show LIVE. Izindaba Zokusakaza Zokusakaza
Ikhaya » Izindaba » IStudio FAMU Isebenzisa Isixazululo se-Quantum sokufinyelela okukude nokulondolozwa kokuqukethwe
IStudio FAMU Isebenzisa Isixazululo se-Quantum sokufinyelela okukude nokulondolozwa kokuqukethwe
SAN JOSE, Calif. - Sept. 15, 2020 - I-Quantum Corp. (NASDAQ: QMCO), umholi womhlaba wonke ezixazululweni zedatha namavidiyo angahlelekile, namuhla umemezele ukuthi iStudio FAMU isitshale I-Quantum Isixazululo sesitoreji esine- I-Quantum I-StorNexisitoreji sefayela esikalwa nge-t®, a IsikaliIngobo yomlando yamateyipu nokuphathwa kwempahla yomtapo wolwazi okuhlanganisiwe. Ipulatifomu iletha isitoreji esilinganisekayo, esimaphakathi ngokulula, ukufinyelela okukude kumafayili ngenkathi kunikezwa ukulondolozwa kwesikhathi eside komsebenzi wabafundi. Ukuqaliswa kusebenza njengesibonelo se- I-QuantumUbuholi bugcina futhi bulawula ividiyo.
"The I-Quantum Isixazululo seStorNext sisenza sikwazi ukubeka ndawonye isitoreji sethu, sinikeze ukufinyelela okulula kwamafayela, futhi siphoqe umthetho othile wokusetshenziswa kwesitoreji njengengxenye yenqubo yokudala, ”kuphawula u-Ondřej Šejnoha, uMqondisi, weStudio FAMU.
Isixazululo Esisha Sokugcina Isitudiyo Sesimanje
Esinye sezikole ezindala kunazo zonke zamafilimu emhlabeni, iStudio FAMU inikeza ukukhiqizwa okukhulu kwamafilimu nezinsizakusebenza zangemva kokukhiqiza ukuxhasa imfundo esezingeni lomhlaba eCzech Republic's Film and TV School of the Academy of Performing Arts (FAMU). Isikole sihlinzeka ngesitoreji sevidiyo sokuzivocavoca cishe amakilasi angama-450 namaphrojekthi amafilimu amakhulu akhiqizwa unyaka ngamunye wesikole. Ngoba lawo maphrojekthi asebenzisa kakhulu amafomethi wevidiyo anezinqumo eziphezulu kanye ne-4K, iStudio FAMU idinga indawo enkulu yokugcina enokushabeka. Ngaphandle kwendlela ehlanganisiwe, ukuphatha nokuvikela idatha nokugcinwa kwamavidiyo okulokhu kukhula kube yinselele enkulu.
Lapho isitudiyo siqala iphrojekthi enkulu yokulungisa ngokomzimba, babona ithuba lokuqala inkathi entsha yalesi sikhungo ngesitoreji esisezingeni eliphakathi esisekela ukukhiqizwa nokwenziwa komsebenzi ngemuva kokukhiqizwa, kusuka kokungenisa ngemuva kokukhiqiza, ukudlala, nokugcina umlando. I-FAMU ibuye ifune ukufinyelela okulula kumafayili, amandla angahlakazeka emiqulu emikhulu yemidiya enokuxazululwa okuphezulu, nokuhlanganiswa nesisombululo somlando sokulondolozwa kwamaphrojekthi isikhathi eside. Ngaphezu kwalokho, isixazululo esisha sokugcina sidinga ukusebenza ngohlelo lokuphathwa kwempahla yemidiya (MAM) ukwenza lula ukuphathwa nokuhlelwa kwamafayela wemidiya ngenkathi kwenza kube lula ukwabelana ngamafayela.
Ngosizo oluhlinzekwa ngumhlinzeki wesevisi ye-IT u-Agora PLUS, iStudio FAMU ikhethe ukuphela kokuphela I-Quantum Isixazululo seStorNext, esine- I-Quantum umtapo wolwazi we-i500 onikwa amandla yi-StorNext system system kanye neplatifomu yokuphathwa kwedatha. Imvelo ihlanganiswe ngaphandle komthungo ne-ELEMENTS Media Library MAM.
Amandla Angahlukaniseki Nokufinyelela okulula okukude okuSekela Amakhulu Amaphrojekthi
Lesi situdiyo sisebenzise indawo enamakhono amaningi engabhekana nomthamo wamafayela wokulungiswa okuphezulu kanye nengobo yomlando ekhulayo. Baqale bahlelela imvelo eyi-2 PB-amaphesenti angama-80 wokukhiqiza namaphesenti angama-20 wokugcinwa kungobo yomlando. Namuhla, abafundi manje banesikhala esanele sokuzinikela ohlelweni lwefayela leStorNext ukugcina izinto zokusetshenziswa, futhi amaphrojekthi aqediwe afakwa kungobo yomlando ku-tape.
“Ngohlelo lwefayela le-StorNext nohlelo oludidiyelwe lwe-MAM, abafundi bangafinyelela emsebenzini wabo noma ngabe bakuphi — ekhaya noma enkantini — kunoma yiluphi uhlobo lwedivayisi. Bayakwazi ukubona amafayela, benze izinguquko, futhi babonise umsebenzi wabo kwabanye abantu abadinga ukuwubona, ”kusho uŠejnoha. “Osolwazi nabo bangabuka futhi bahlole umsebenzi ukude. Kulula kakhulu kunokuhambahamba kuma-flash drive noma kuma-hard drive wangaphandle ubhaka. ”
Ukufinyelela emsebenzini kude bekubalulekile lapho ubhadane lwe-coronavirus lufinyelela eYurophu. “Sijabule kakhulu ngokuthola i- I-Quantum Isixazululo ngalesi sikhathi esiyinselele. Nge I-QuantumIsixazululo seStorNext, kulula kakhulu ukuhlanganyela noma yini nabafundi, osolwazi nezinye izinhlangano — noma ngabe bakuphi emhlabeni, ”kusho uŠejnoha.
Ukuvikela Amaphrojekthi kanye Nesiyalo Sesitoreji Sokufundisa
Okuqukethwe okumaphakathi kusiza iStudio FAMU ukuvikela amaphrojekthi abafundi abatshala kuwo isikhathi sabo esiningi, futhi amandla eScalar Extended Data Life Management (EDLM) asiza ekuqinisekiseni ukuthi idatha ihlala itholakala eminyakeni ezayo. Le ndlela yesimanje futhi inika amandla iStudio FAMU ukusebenzisa izinqubomgomo ezingaguquguquki. “Isitoreji siyingxenye edingekayo yenqubo yonke yokukhiqiza. Abafundi abakwazi ukweqa isitoreji, ”kusho uŠejnoha. “Ngesixazululo seStorNext, singaqiniseka ukuthi abafundi abasafihli imininingwane kwenye indawo. Bafunda ukubaluleka kokuziphatha okufanele kwesitoreji, abazokudinga emhlabeni wangempela. ”
Funda lonke lolu cwaningo lweStudio FAMU: www.quantum.com/en/resource/customer-success/studiofamu/
Funda kabanzi mayelana no-StorNekulandelayo: www.quantum.com/stornext
Ukuthola okuningi nge-Scalar tape: www.quantum.com/en/products/tape-storage/
I-Quantum ubuchwepheshe kanye nezinsizakalo zisiza amakhasimende ukuba athathe, adale futhi ahlanganyele okuqukethwe kwe-digital - futhi alondoloze futhi avikele amashumi eminyaka. Ngesisombululo esakhiwe kuzo zonke izigaba zendlela yokuphila kwedatha, I-QuantumI-platforms inikeza ukusebenza okusheshayo kwevidiyo ephezulu yokuxazulula, izithombe, kanye ne-Industrial IoT. Yingakho izinkampani zokuzijabulisa zokuhola zomhlaba, i-franchises yezemidlalo, abacwaningi, ama-ejensi kahulumeni, amabhizinisi, kanye nabahlinzeki befu benza izwe lijabule, livikeleke futhi lihlakaniphile I-Quantum. I-Quantum ibhalwe ku-Nasdaq (QMCO) futhi yangezwa ku-Russell 2000® Index ngoJuni 26, 2020. Ukuthola eminye imininingwane vakashela www.quantum.com/.
Ngaphambilini: I-New Bolt 4K LT yeTeradek: I-On-ramp engabizi ku-4K HDR Monitoring Workflows
Olandelayo: IVerizon Media yethula amakhono amasha weplatifomu aklanyelwe ukuguqula isipiliyoni sokusakaza bukhoma